Joogtaynta deegaanka, noocyada, cabirka iyo ujeeddooyinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | General, Hoyga Cagaaran, Deegaanka
Markaan tixraacno joogtayn ama joogtayn Cilmiga deegaanka, waxaan ku sifeyneynaa sida nidaamyada bayoolojiga ay u “waarayaan” kala duwanaanta, noogu adeegaan kheyraad ahaan, isla markaana waqti wax soo saar leh.
Taasi waa, waxaan ka hadlaynaa dheelitirka noocyada iyo kheyraadka deegaanka. Sida ku xusan warbixinta Brundtland ee 1987 oo tixraaceysa nafteena sida nooc ka mid ah, joogtayntu waxay khuseysaa dhiig-miirashada kheyraad by ka hooseeya xadka cusboonaysiinta dabiiciga ah waxaa ka mid ah.
1 Noocyada waara
1.1 Joogtaynta siyaasadeed
1.2 Dhaqaalaynta dhaqaalaha
1.3 Joogtaynta deegaanka
2 Cabbiraad waarta deegaanka
2.1 Tusmada waarta
2.2 Tusmada Waxqabadka Deegaanka
2.3 Natiijada Triple
3 Yoolalka waara deegaanka
3.1 Waaritaanka gurigaaga
4 Astaamaha magaalooyinka waara
4.1 Nidaamyada horumarka iyo socodka magaalooyinka.
4.2 Maareynta dhameystiran ee qashinka adag, biyaha iyo fayadhowrka.
4.3 Ilaalinta hantida deegaanka.
4.4 Farsamooyinka waxtarka tamarta.
4.5 Qorshaha deganaanshaha ee saamaynta isbeddelka cimilada.
4.6 Xisaabaad maaliyadeed oo abaabulan iyo isku xirnaan ku filan.
4.7 Tilmaamaha wanaagsan ee amniga muwaadinka.
4.8 Kaqeybgalka Muwaadinka
Joogtayntu waxay raadineysaa himilo guud waana taas sababta ay u tahay geeddi-socod dhaqan-dhaqaale.
Taasi waxay tiri, waxaan dhihi karnaa waxaa jira dhowr nooc oo waara.
Dib u qaybi awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale, waxay xaqiijineysaa inay jiraan sharciyo isdaba joog ah oo dalka ka jira, oo ah inaan helno dowlad aamin ah isla markaana dejino qaab sharciyeed damaanad qaadaya ixtiraamka dadka iyo deegaanka.
Waxay kobcinaysaa xiriirka wadajirka ah ee ka dhexeeya bulshada iyo gobollada sidaas awgeedna kor loogu qaadayo tayada nolosha iyo yaraynta ku tiirsanaanta bulshada, sidaas awgeedna loo abuurayo qaabab dimuqraadi ah.
Markii aan ka hadlayno waaritaankan waxaan tixraacaynaa kartida lagu abuurayo hantida qaddarka loo siman yahay kuna habboon dhinacyada kala duwan ee bulshada, in la dhiso dadweynaha ha noqdaan gebi ahaanba karti u leh oo xallin kara dhibaatooyinkooda dhaqaale, Iyaga ayaaba kordhin kara wax soo saarka isla markaana xoojin kara isticmaalka qeybaha wax soo saarka lacagta.
Sababtaas awgeed, haddii joogtayntu ay tahay dheelitir, noocan noocan ahi waa isu dheelitirka dabeecadda iyo aadanaha, dheelitirka doonaya inuu qanciyo baahiyaha jira iyada oo aan loo hurayn jiilalka soo socda.
Noocan ah joogtayntu waa tan ugu muhiimsan (in laga barto maaddooyinkeenna waxbaridda) iyo ujeeddada "falanqaynta" qodobkan.
Waxa loola jeedaa wax aan ka badnayn ama ka yar awood u leh inuu ilaaliyo dhinacyada bayoolojiga wax soo saarkeeda iyo kala duwanaanteeda waqtiga. Sidaas ayaa lagu ilaaliyaa kheyraadka dabiiciga ah.
Waaritaankani wuxuu dhiirigelinayaa mas'uuliyadaha bey'adda ku habboon waxayna ka dhigeysaa horumarka aadamuhu inuu ku koco daryeelka iyo xushmeynta deegaanka uu ku nool yahay.
Cabbiraad waarta deegaanka
Tallaabooyinka waara waa deegaan ama noocyo kale, waa tallaabooyin tiro ah marxaladaha horumarinta si ay u awoodaan inay dejiyaan habab maareynta deegaanka.
3da talaabo ee ugufiican maanta waa Tilmaanta Joogtaynta Deegaanka, Heerka Waxqabadka Deegaanka iyo natiijada sadex geesoodka ah.
Kani waa tixraac dhawaanahan waana hindisaha Hoggaamiyeyaasha Caalamiga ee Berrito Task Force ee Golaha Dhaqaalaha Adduunka.
Tusmada Joogtaynta Deegaanka ama Joogtaynta Bay'ada, marka la soo koobo WAA I, waa tilmaame tilmaamaya, kala jaad ah qaabeysan, oo ka kooban 67 doorsoomayaal oo ah miisaanka miisaanka loo siman yahay ee wadarta guud (marka loo eego qaab dhismeedka 5 qaybood, isla markaana ka kooban 22 arrimood).
Sidan,, ESI waxay isku daraysaa 22 tilmaamayaasha deegaanka oo ka bilaabma tayada hawada, yareynta qashinka ilaa ilaalinta wadaagga caalamiga ah.
Darajada dal kastaa helay waxaa loo kala qaaday 67 maadooyin oo gaar ah, sida cabbirka baaruud dioxide ee hawada magaalooyinka iyo dhimashada la xiriirta xaaladaha fayadhowrka oo liita.
ESI wuxuu cabirayaa shan qodob oo dhexe:
Xaaladda nidaamyada deegaanka ee waddan kasta.
Guusha laga gaadhay hawsha yareynta dhibaatooyinka waaweyn ee nidaamyada deegaanka.
Horumarka laga ilaalinayo muwaadiniinteeda waxyeelada ugu dambeysa ee deegaanka.
Awoodda bulsho iyo hay'ad ee ummad kasta ay leedahay inay ku kacdo tallaabooyin la xiriira deegaanka.
Heerka maamul ee waddan kasta leeyahay.
Tani waa tixraac ahaan sida isu-geynta meganumerary, ujeedadiisu tahay in "lagu miisaamo" GDP iyo Heerka Tartanka Caalamiga ah (ICI), si loo buuxiyo macluumaadka la taaban karo, si wanaagsan loogu hago go'aan qaadashada iyo qaabeynta iyo fulinta siyaasadaha.
Kala duwanaanshaha isbeddelada deegaanka ee lagu daray waa mid aad u dhameystiran (uruurinta iyo qiiqa wasakheynta, tayada iyo tirada biyaha, isticmaalka tamarta iyo waxtarka leh, meelaha gaarka u ah gawaarida, isticmaalka agrochemicals, kororka dadka, aragtida musuqmaasuqa, maareynta deegaanka, iwm), in kasta oo qorayaashu laftoodu qirayaan inay jiraan doorsoomayaal aad u xiiso badan oo aan xog laga hayn.
Macluumaadka ay daadiyeen natiijooyinka ugu horreeya tusmadaani waxay umuuqataa mid lasocota waxa lagu ogaan karo xaqiiqda, haysashada qiimaha ugu fiican ee ESI dalal ay ka mid yihiin Sweden, Canada, Denmark iyo New Zealand.
Tusmada Waxqabadka Deegaanka
Waxaa loo yaqaan gaabinta PPE Tilmaanta Waxqabadka Deegaanka waa qaab loogu talagalay tiro iyo kala saar tiro ahaan ah waxqabadka deegaanka ee siyaasadaha dalka.
Isbedelada lagu xisaabtamo xisaabinta EPI waxaa loo qaybiyaa 2 ujeeddo: muhiimadda nidaamka deegaanka iyo caafimaadka deegaanka.
sidoo kale, caafimaadka deegaanka ayaa loo qaybiyaa qaybaha siyaasadeed, gaar ahaan 3 kuwaas oo ah:
Saamaynta tayada hawadu ku leedahay caafimaadka.
Nadaafad aasaasi ah iyo biyo la cabbo.
Saameynta deegaanka ee caafimaadka.
Iyo firfircoonida deegaanka ayaa loo qaybiyaa 5 qaybaha siyaasadeed sidoo kale waa:
Kheyraad dabiici ah oo wax soo saar leh.
Kala duwanaanshaha noolaha iyo deegaanka.
Saameynta wasakheynta hawada ee nidaamka deegaanka.
Si wadajir ah dhammaan qaybahaas iyo si loo helo natiijada tusmada, waa la tixgeliyaa 25 tilmaamayaal qiimeyntaada ku habboon (waxaa lagu muujiyey sawirka hoose).
Sadarka hoose ee saddexda ah ama sadarka hoose ee saddexda ah ma aha wax ka badan a erey la xiriira ganacsi waara, iyadoo la tixraacayo waxqabadka ay sababtay shirkad lagu muujiyey saddex dhinac: bulsho, dhaqaale iyo deegaan.
Caddaynta waxqabadka ee la xiriirta natiijo saddex-laab ah Waxay ku muujinayaan joogtaynta ama warbixinnada mas'uuliyadda bulsheed ee shirkadaha.
Intaa waxaa dheer, urur leh waxqabadka wanaagsan Xisaabinta marka la eego, sadarka hoose ee saddexda ah wuxuu lahaan doonaa natiijada ugu badnaan faa iidadiisa dhaqaale iyo masuuliyada deegaanka, iyo waliba yaraynta ama ka takhalusida dibedda xun ee ay leedahay, iyadoo xoogga saareysa mas'uuliyadda bulshada ee ururka ka saaran daneeyayaasha, oo aan ku koobnayn oo keliya saamileyda.
Yoolalka waara deegaanka
Waaritaanku wuxuu wajahayaa dhibaatooyin waawayn maanta dunida kana mid ah baahida loo qabo sharad si hufan by Tamarta la cusboonaysiin karo intee in le'eg ayaan ku taageernaa balooggan.
Waana isticmaalka tamarta dhaqameedku a xirashada deegaanka taasi waxay dhowaan noqon doontaa mid aan laga noqon karin.
Sababtaas awgeed ayay tahay ujeeddada ugu horreysa ee waarta ay tahay in la gaaro (oo waxaan ula jeedaa tan guud, ma ahan oo keliya tan deegaanka) maarayn si loo abuuro damiir caalami ah.
Waa inaan fahamno inaan ku jirno a meeraha isku xiranIn waxa aan qabano ay saameyn ku yeelato dadka kale go'aankeena wanaagsan ama xunna ay saameyn ku yeelan doonaan wiilasheena iyo gabdhaheenna mustaqbalka dhow.
Si tartiib tartiib ah wacyi galinta ayaa qaabeynaysa madaama dadaallo badan oo aad u wanaagsan lagu arkay dalal kala duwan si kor loogu qaado waaritaanka ku filan.
Kiiska ugu dhow waa kan mashruuca Barcelona Smart City, taas oo ku jirta qaybta ah Barcelona + waara, wuxuu abuuray khariidad wada shaqeyn ah halkaas oo dhammaan qorshooyinka waara ee magaalada la isugu geeyo. Aalad ka xiiso badan in lala socdo dhammaan dadaallada la fulinayo.
Gurigaaga waari karaa?
Maanta waxaa jira inbadan oo inaga mid ah oo ka fikiraya inaan yeelano guri waara, Way fiican yihiin tan iyo markii ay tixgeliso arrimo kala duwan, sida jihaynteeda, tamarta ay isticmaasho (gaar ahaan qorraxda), meelaha furan ee ay ka mid tahay iyo sida loo dahaadhay si looga fogaado tamar la’aanta.
Dhammaan horumarintani waxay ka dhigayaan kuwo tamarta hufan oo wasakh yar, waana sidaas joogtaynta shaqaysaa inaad ka fiirsan karto inaad sameyso mustaqbalka fog si aad uga qayb qaadato naftaada caafimaadka meeraha.
Xaqiiqdii, waad booqan kartaa 2 qodob oo ku saabsan dhismaha bioclimatic aad u xiiso badan:
Keydinta tamarta guryaha. Qaab dhismeedka bioclimatic.
Qaab dhismeedka bioclimatic. Tusaale gurigayga.
Astaamaha magaalooyinka waara
Ku noolaanshaha guri gebi ahaanba waara waa mid aad u faa'iido badan, laakiin haddii aan ka fikirno miisaan ballaaran, waa maxay astaamaha magaalooyinka waara?
Magaalooyinka loogu yeero waarta waa inay lahaadaan astaamaha soo socda:
Nidaamyada horumarka iyo socodka magaalooyinka.
Goobaha caamka ah iyo aagagga cagaaran waa la ixtiraamaa; safarku ma qaato waqti dheer (ciriiriga loo dulqaadan karo), gawaarida iyo dadku si wada jir ah ayey u wada noolaadaan.
Gaadiidka dadweynaha waa mid hufan, gaadiidka gaarka loo leeyahayna wuxuu gaabiyaa koritaankiisa.
Maareynta dhameystiran ee qashinka adag, biyaha iyo fayadhowrka.
Qashinka adag waa la ururiyaa, la kala saaraa, si habboon loo keydiyaa oo dib loo warshadeeya si loo soo saaro qiimo boqolkiiba aad u badan.
Biyaha wasaqda ah waxaa lagu daaweeyaa oo dib loogu rogaa ilaha biyaha dabiiciga ah, taas oo yareyneysa xaalufinta deegaanka.
Ilaha biyaha (Xeebaha, harooyinka, webiyada) waa la ixtiraamaa waxayna leeyihiin heerar fayadhowr oo ku filan aadanaha.
Webiyada magaalooyinka waxay si firfircoon ugu dhex milmeen nolosha magaalada.
Ilaalinta hantida deegaanka.
Xeebaha, harooyinka iyo buuraha waa la ilaaliyay oo lagu dhex daray hormarinta magaalooyinka magaalada, marka waxaa loo isticmaali karaa nolosha bulshada iyo horumarka magaalada.
Farsamooyinka waxtarka tamarta.
Magaalooyinkani waxay hirgeliyaan teknoolojiyad ama nidaamyo cusub si loo yareeyo isticmaalka korontada. Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu tilmaamayaan isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo.
Qorshaha deganaanshaha ee saamaynta isbeddelka cimilada.
Meelaha nugul ee ay dadku degaan inay ku noolaadaan waa la dhimay halkii laga kordhin lahaa, maadaama ay jirto qorshe guri oo beddel ah waana la hirgelin karaa
Xisaabaad maaliyadeed oo abaabulan iyo isku xirnaan ku filan.
Waxaa jira koontooyin cad oo hufan, gelitaanka internetka ayaa sii kordhaya, xawaaraha isku xirka ayaa ku filan dadkuna waxay u haajiraan dhanka dijitaalka adeegyada bulshada.
Tilmaamaha wanaagsan ee amniga muwaadinka.
Deggeneyaashu waxay dareemayaan inay si nabad ah ku wada noolaan karaan maxaa yeelay dhacdooyinka fal-dambiyeedyada iyo fal-dambiyeedyada abaabulan way sii yaraanayaan waxayna u muuqdaan inay xasilloonaan heerar hoose.
Bulshadu waxay isticmaashaa ilaha isgaarsiinta, sida barnaamijyada moobiilka, si ay ugala hadlaan sida loo xaliyo dhibaatooyinka si loo hagaajiyo magaalada.
Bulshada rayidka ah iyo inta kale ee jilayaasha maxalliga ah ayaa loo abaabulay inay awood u yeeshaan inay saameyn ku yeeshaan waxqabadka maalinlaha ah ee nolosha magaalada.
Waxaan kaaga tegayaa sawirkan ugu dambeeya ee aad ku hubin karto magaalooyinka ugu waarta iyo kuwa ugu yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Joogtaynta deegaanka, noocyada, cabirka iyo ujeeddooyinka